IMovie bụ ike kacha ike video edezi usoro ihe omume Mac kọmputa. Ọ dị mfe iji na ya nwere otutu nhọrọ. Ọbụna ụfọdụ ndị ọkachamara na-eji iMovie n'ihi ihe ndị a nhọrọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụ onye na mbido, mkpa ka ị mara ihe ụfọdụ, tupu amalite iji IMovie. Ke ofụri ofụri, ị ga-mkpa a di na nwunye nke awa '' na-achọpụta '' niile ohere nke iMovie. Mgbe ahụ, ị ​​ga-abụ ọkachamara. Dị ka unu wee kwere, akụkụ kasị mkpa bụ ịzọpụta a oru ngo. On Mac kọmputa, nke a bụ bit mgbagwoju anya karịa ihe na Windows kọmputa. Nke a bụ ọbụna karị ma ọ bụrụ na ị na-eji a PC na ugbu a ị na-eji a Mac kọmputa maka oge mbụ. Ụfọdụ nhọrọ nwere kpamkpam dị iche iche aha na a Mac kọmputa karịa na a PC.
Part 1: Olee ịzọpụta okokụre iMovie oru ngo
Part 2: Olee ịzọpụta emechaghi iMovie oru ngo
Nkebi nke 3: Olee imeghe emechaghi iMovie oru na ọzọ kọmputa
Gịnị bụ iMovie bupu formats?
IMovie nwere ike ịzọpụta a oru ngo na ọtụtụ dị iche iche formats. Ị kwesịrị ị na-azọpụta ya na a format na suut gị ihe kasị mma. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ igwu na ihe nkiri na gị iPhone, ị kwesịrị ị na-azọpụta ya na H.264 / MPEG-4 usoro. Cheta na ụfọdụ ngwaọrụ gaghị emeghe gị oru ngo ọ bụrụ na e zọpụta na unsupported usoro. Ọzọ, na-akwado formats na IMovie bụ: DVCPRO50-PAL; H.264 SD / HD B-ụba; ; DV / DVCPRO-NTSC; Planar RGB; DVCPRO50-NTSC; H.264 / MPEG-4; Uncompressed; Photo-JPEG; ; Sorenson Video 3; H.261; H.263; Animation; AIC na H.261.
Olee otú ịzọpụta okokụre iMovie oru ngo
Mgbe ị gụsịrị edezi gị video, ị ga-azọpụta ya. Ọ bụrụ na ị ụzọ ọpụpụ si iMovie, enweghị na-azọpụta a faịlụ, ọganihu gị ga-efu. On a Mac kọmputa, ị ga-mbupụ gị oru ngo, otú ị nwere ike ịnweta ya na ihe ọ bụla Finder nchekwa. Export pụtara na ị ga-akpali gị faịlụ site na usoro ihe omume na kọmputa. Nke a bụ a yiri nhọrọ dị ka '' Save '' na kọmputa na ngwaọrụ ndị ọzọ. Iji na-eme nke a, ị ga-eso ndị a.
1. Mgbe ị mepee IMovie, na-emeghe gị oru ngo ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ. Mgbe ị na-eme, pịa Share na mgbe ahụ na Export Movie. Ị ga-ahụ menu na elu nke gị na ihuenyo.
2. Pịnye aha gị oru ngo na ịhọrọ ebe ị chọrọ ịzọpụta ya. Ị ga-ahụ a mmapụta menu. I nwekwara ike pịa akụ na na ịnyagharịa ebe ị chọrọ ịzọpụta gị oru ngo.
3. Ugbu a, ị nwere ike ịhọrọ size nke nkiri. The table ga-egosi gị ihe kasị mma size nke a kpọmkwem ngwaọrụ. Ị ga-amarakwa na akụkụ ruru emetụta na size gị nkiri. Ka ihe atụ, widescreen akụkụ ruru ga-amụba size gị oru ngo. Ị nwere ike jide gị pointer on '' M '' akara ngosi. Mgbe 2 sekọnd, ị ga-ahụ video mkpakọ, eku ọnụego, data ọnụego na nke nke nkiri (na megabytes). Pịa mbupụ na ị na-eme.
Ugbu a, mgbe ị chọrọ ịhụ gị oru ngo, ihe niile ị chọrọ ime bụ ịnyagharịa ka nchekwa ị ịhọrọ site na mmapụta menu.
Ọ bụla onye ọrụ chọrọ ịzọpụta emechaghi oru ngo n'ụlọ ụfọdụ ebe. Mgbe ị na-eme nke a, ị nwere ike idezi oru ngo na ọzọ na kọmputa, ma ọ bụ nọgide na-edezi na gị Mac kọmputa mgbe ị chọrọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka, ị ga-azọpụta emechaghi oru ngo na-anọgide na edezi ya na ọzọ kọmputa, ebe a enyi nwere ike inyere gị. Nke a bụ a bara uru atụmatụ na a otutu ọrụ na-eji ya. Na n'akụkụ nke ọzọ, bụ ndị ọkachamara na-eji ya mgbe niile. Ha apụghị mezue a oru ngo na nanị otu kọmputa. Ọ bụrụ na ị aghaghị ịnọgide na-edezi gị oru ngo na ọzọ kọmputa, ị kwesịrị iso nzọụkwụ ndị. Cheta na ihe emechaghi oru ngo e mere maka Mac kọmputa.
Olee otú ịzọpụta emechaghi iMovie oru ngo
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta emechaghi IMovie oru ngo, ị ga-eso ndị a. Ị ga-amarakwa na usoro dị iche karịa ị chọrọ ịzọpụta a okokụre oru ngo.
1. Gaa menu File-Open Library-New. Nye a aha ọbá akwụkwọ ọhụrụ ma họrọ a ịzọpụta ọnọdụ site dobe menu. Ọ na-atụ aro ịhọrọ gị mbughari mbanye.
2. Họrọ ebe nchekwa. O nwere ike ịbụ a mbughari mbanye, ma ọ bụ ọ pụrụ ịbụ na ụfọdụ ndị ọzọ nchekwa. Mgbe ị na-eme, pịa Save, na gị na oru ngo ga-azọpụta.
3. Ugbu a, i nwere abụọ ọba akwụkwọ gị navigation panel. Ịdọrọ na dobe gị oru ngo ọbá akwụkwọ, ị dị nnọọ kere. Nke a pụtara na gị na oru ngo a zoputara.
Mgbe ị chọrọ emeghe gị emechaghi oru ngo, na ọzọ na kọmputa, ị ga-eso ndị a. Luckily, usoro dị nnọọ mfe ma ọ dịghị achọ a otutu oge. I kwesịrị ịma na ma nsụgharị nke IMovie, ga-abụ otu ma ọ bụ yiri nsụgharị. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na onye IMovie na otu Mac kọmputa bụ ọhụrụ, na ọzọ bụ nnọọ agadi, e nwere ụfọdụ nsogbu na-emeghe gị oru ngo.
1. Launch IMovie na nkwụnye gị mbughari mbanye ke kọmputa. Ị pụrụ ọbụna iji a na kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ na mpụga HDD nyefee gị faịlụ. Gaa na menu File-Open Library-ọzọ.
2. Pịa na Chọpụta bọtịnụ. Ị ga-eme nke a iji na-ahụ gị mbughari mbanye na-emeghe oru ngo.
3. Pịa na gị mbughari mbanye. Ọ na-emi odude ke akaekpe. Mgbe ahụ, chọta faịlụ na ị chọrọ na-emeghe. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ faịlụ gị mbughari mbanye, chọta onye ị chọrọ na-emeghe.
Ugbu a, gị na oru ngo bụ na-emeghe on ọzọ na kọmputa. Ị nwere otu nhọrọ dị ka na gị onwe gị Mac kọmputa. Mgbe ị na-mere edezi, zọpụta ya dị ka a okokụre oru ngo. Ị nwere ike iji otu mbughari mbanye nyefee faịlụ azụ, gị na kọmputa. I kwesịrị ịma na IMovie oru ngo-emekarị nwere nnukwu size. Nke a pụtara na ị na-aga mkpa a mbughari mbanye na elu ikike. Ụfọdụ IMovie oru ngo-achọ a di na nwunye nke gigabytes nke ohere. Ọzọkwa, ndị na-ebufe usoro bụ na-adịghị na ọ na-ewe a di na nwunye nke nkeji ma ọ bụ ogologo oge, ma ọ bụrụ na a faịlụ bụ oke buru ibu.
> Resource> iMovie> Olee ịzọpụta iMovie ngo ke Mac